Fanoherana · Desambra, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Desambra, 2008
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Desambra, 2008
Frantsa10 Desambra 2008
Nisy lahatsoratra nivoaka tamin'ny 1 Desambra tao amin'ny China.com mampirisika ny firenena manontolo hanao fahirano ny vokatra frantsay ho fanoherana ny fihaonana eo amin'ny Filoha frantsay Nicolas Sarkozy sy ny Dalai Lama. Manome torohevitra ny mpanjifa ny lahatsoratra tsy hividy marika frantsay tokony ho 50 eo ho eo ka anatin'izany...
Thailandy10 Desambra 2008
Iràna10 Desambra 2008
Ady & Fifandirana04 Desambra 2008
Tsindraindray tadiavina mihitsy vao mba azo isangisangiana izany fifandraisana iraisam-pirenena izany. Fa misy bolongana isiraeliana iray izay tena manala azy mihitsy. Mitondra ho antsika izany tantara izany i Maya Norton. (Tsy anti-virus)
Karaiba03 Desambra 2008
Nisafotofoto ny toe-draharaha any amin'ny faritry Goyana Frantsay efa herinandro mahery izay. Manohitra ny fiakaran'ny vidin'ny lasantsy amin'ny alalan'ny fametrahana barazy manerana ny lalana, fanakatonana ny sekoly sy orinasa ny mponina. Amin'izao fotoana izao dia €1,77 isaky ny litatra ny vidin'ny lasantsy (US$ 2,25), izay mifandaka amin'ny fidinan'ny solika izay...
Shina03 Desambra 2008
Nitokona nanditra ny iray volana ny mpamily fiarakaretsaka nanerana ny firenena. Tany Chongqin no nitranga ny fitokonana voalohany tamin’ny 3 Novambra teo, niitatra tany Hainan, Gansu, Yunnan, Shandong, Qingdao, Jinan, Fujian, Shantou, Wubei, Shaanxi ary tanàna hafa maro koa izany. Tahaka ny hoe nisy fitokonan’ny mpamily fiarakaretsaka ny 1 Desambra...